(Daawo Sawirro) Meydadka ku dhowaad boqol tahriibayaal ah oo laga helay xeebaha gobolka Zawiya Libiya! | kowtharmedia.com
Home WARAR (Daawo Sawirro) Meydadka ku dhowaad boqol tahriibayaal ah oo laga helay xeebaha gobolka Zawiya Libiya!
(Daawo Sawirro) Meydadka ku dhowaad boqol tahriibayaal ah oo laga helay xeebaha gobolka Zawiya Libiya!
Maydadka 87 tahriibayaal ayaa laga helay xeebaha dalka Liibya, iyadoo dadkani doonayeen inay ka tallaabaan badda Mediterranean-ka, si ay u gaaraan Talyaaniga haatan waxaa xerooyin ku xaraysan Soomaali badan.
Tirada tahriibayaasha ku dhimatay Badda Liibiya ayaa sare u kacday Bilihii la soo dhaafay, sida hay’adaha ay sheegayaan.
Afhayeenka Bisha Cas ee Libya, Maxamed Al-Misrati ayaa u sheegay Wakaalladda Wararka AP in maydadkaasi saaka ay ku soo caariyeen Xeebta Zawiya, isagoo tilmaamay inaysan weli kala caddayn xaaladda ay dadkaasi ku maashoobeen ama ku hafteen.
Shaqaalaha bisha cas ayaa sheegay in doon bac ah oo dillaacday ay ka heleen meel u dhow xeebta maydadka laga soo aruuriyay sidoo kale biyaha Badda ayaa imakadaan ah biyo qabow ah.
Maxamed Al-Misrati wuxuu sheegay in maamulka deegaanka ay maydadka geeyeen qabuuro ku yaalla magaalada Tripoli.
Kumanaan qof ayaa ku dhintay badda Mediterraneanka sanadihii lasoo dhaafay kuwaasoo isku dayeyey iney doonyo macmal ah ku galaan qaarada Yurub iyagoo ka safray xeebaha Liibiya.
Previous PostDaawo Sawirada: Munaasabada Caleemo saarka Madaxweynaha oo si rasmi ah u bilaabatay iyo Madax kala duwan oo kaso qayb gashay! Next PostDaawo Sawirro: Mowshin culus oo laga keenay Madaxweynaha Hirshabelle & wasiiro iscasilay!!